Xiisad ka taagan degmada Buurtinle iyo Wafdigii Madaxweyna Gaas oo ku wajahan | Puntland Vision
Xiisad ka taagan degmada Buurtinle iyo Wafdigii Madaxweyna Gaas oo ku wajahan
16 Luuliyo (Puntland Vision)—Xili tan iyo shalay xiisad la xiriirta sixir barar ay ka taagnay degmada buurtinle ee gobolka Nugaal ayaa maanta waxaa xiran guud ahaan isku socodka Magaalada iyo xarumaha ganacsiga.
Madaxwaynaha dawldaa Puntland mudane C/wali Maxamed Cali Gaas iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa saaka ku baxay degmada Buurtinle si ay u dajiyaan xaalada kacsan ee ka taagan degmada Buurtinle.
Wadiga madaxwaynaha intii uusan gaarin degmada ayaa shacab caraysan saakadii hore waxay isugu soo baxeen laamiga dheer kuwaas oo taayiro iyo ku gubaya gudaha magaalada waxaana sidoo kale looga cabanayaa banaanbaaxan lacagta shilinka Soomaaliga ah oo sarifkeedu meeshii ugu saraysay uu marayo gudaha degmada.
Degmada Buurtinle ayaa shalay dibad bax ka dhacay waxaa dajiyey oo ka hortay ciidamada amnaanka ee degmada buurtinle kadib markii ay ka cabsadeen inuu isku bedelo Dibad bax rabshadta.
Halka Dollar ayaa gudaha degmada Buurtinle ka gaaray 35 Kun shilin Soomali ah ilaa 40 kun shilin iyadoo sidoo kale lacagta lakala soocayo waxaana ganacsatadu ay sheegeen inay timid degmada lacag laga soo caliyey Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya.
Wararka aan hada kala helayno Degmada Buurtinle ayaa sheegay in wafdigii madaxwaynaha Puntland aysan ku istaagin magaalada oo shacabkii ay banaanbax xoogan ka samaynayaan.
Wixii warar ah ee kasoo kordha dib kala soco.